Apple Mividy ilay «Lehilahy Be ao Amin'ny Campus» fanadihadiana momba ny kintan'ny Makur Maker | Basketball Vaovao IPhone
Manakaiky ny fahavaratra ary manakaiky ihany koa ny vanim-potoana izay mety hahafahantsika mankafy fotoana malalaka bebe kokoa. Maninona raha mankafy ny katalaogim-peo momba ny sehatra video streaming? Androany vao namoaka ny fividianana horonantsary fanadihadiana vaovao ho an'ny Apple TV + i Apple, ary io nanjary nalaza be ny fanadihadiana. Tsy ho ela dia ho hitantsika i Big Man ao amin'ny Campus, ilay tantara Apple TV + vaovao mifantoka amin'ny kintana NBA Makur Maker.
Araka ny lazainay aminao, Apple vao nanamafy ny fividianana Lehilahy goavambe ao amin'ny Campus andiam-panadihadiana iray tarihin'i Seth Gordon izay mitondra antsika ny tantaran'i Makur Maker. Ho an'ireo izay tsy mahalala azy, Makur Maker dia kintana NBA izay nanapa-kevitra ny hilalao basikety amin'ny taona 2020 mba hanohanana ny fanovana ara-poko nitranga tamin'ny taona lasa.
"Big Man on Campus" dia tantaran'ny fotoana manan-tantara tany Amerika notantaraina tamin'ny alàlan'ny fahitan'ny atleta tanora iray manana fahefana hamorona fanovana. Tamin'ny taona 2020, taona iray nanamarihana ny korontana ara-tsosialy, ny fahatsapana ny basikety, ny hiatus NBA, ary ny sangany farany ambony amin'ny NCAA, Makur Maker, nanapa-kevitra ny hilalao baskety any amin'ny oniversite ho an'ny Howard University ho fanohanana ny Colleges mainty ara-tantara sy oniversite fa tsy hiditra amin'ny iray amin'ireo fandaharana ambony indrindra izay manolotra asa feno ho anao. Ny fandanjana ny fanerena tsy manam-paharoa eo an-kianja sy any ivelany, ary ny mason'ilay firenena mifantoka amin'ny fihetsiny rehetra, ny dian'ny Maker - avy amin'ny fandosirana an'i Sodana atsimo rotidrotiky ny ady tamin'ny fahazazany hatrany amin'ny hetsika natolony androany - dia nanisy endrika ny fiarahamonina sosiopolitikika amerikana. mandritra io fotoana tsy mbola nisy toa azy io.
Araka ny hitanao, fanadihadiana fanadihadiana be dia be io, Apple dia manaraka ny làlana voamarika tamin'ny fotoana taloha tamin'ny fanoloran-tenany ara-tsosialy, ary androany ny tantaran'ity fomba ity no tsara indrindra azon'izy ireo natomboka. Tsy mbola misy daty famotsorana fa raha vantany vao fantatray dia avelanay ho anao amin'ny lahatsoratra vaovao. Ary ianao, Moa ve ianao fanadihadiana bebe kokoa na foronina?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Apple nividy fanadihadiana fanadihadiana 'Big Man on Campus' momba ny kintan'ny basikety Makur Maker